Umenzi womnatha wokuThintela ukuThengisa kunye nokuThengisa | Iigusha ezintathu
Umnatha wokukhusela umkhono ulungele ukukhuselwa kwemveliso kunye nokwahlulwa kwemveliso kuyo yonke inkqubo, ukuphatha, ukuhambisa kunye nokugcina izicelo. Imilo yedayimane evulekileyo iphelisa ukubanjiswa komswakama, ngaloo ndlela ikhusela ngokuchasene nomhlwa kunye nomhlwa. Ukugcina akuyi konakalisa, kuthintela ukonakala komphezulu ongaphandle. Ingasetyenziselwa ukupakisha iziqhamo kunye nemifuno, imfutshane kwaye intle kwaye kulula ukuyiphatha.
I-Flexible polyethylene netting slides ngokulula ngaphezulu kwezinto ezingaqhelekanga.
Ukukhusela ibhotile ye wayini, isiqwenga somsebenzi wentsimbi, intyatyambo, ibrashi yobuso, njl
Bonke Ubungakanani ngentando
PE enemingxuma sleeve Net Elastic Tubular kukhuseleko Net
Isixhobo: Iplastiki, i-PE Avirulent Insipidity
1.I-polyethylene ethambileyo, icwecwe, kulula ukuyigcina, ubomi obude
2. Sebenzisa kwakhona uphinde usebenzise kwakhona, ukhuseleko lwezoqoqosho nokusingqongileyo.
3.High bhetyebhetye, kunokuba nayiphi na imilo ukutshatisa iindawo okanye iimveliso.
4.Can ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zabathengi ezahlukeneyo.
Ifanelekile ukuba iseti ye-casing 6mm-600mm ubukhulu bempahla, ubungakanani be-mesh 3mm-30mm, umnatha wegram ngeemitha nganye, ubukhulu becala locingo, ubukhulu be-mesh, bunokuhlengahlengiswa ngexesha lokuvelisa. Kananjalo inokuvelisa ngokwezicelo zabathengi, imveliso esecaleni ine-elasticity elungileyo.
Into No. Ububanzi Ubukhulu enemingxuma Isixhobo somsebenzi gsm / m
I-TSG-WT-01 6MM 3mm 6-10MM 6g / m
I-TSG-WT-02 10MM 5mm 10-20MM 10g / m
I-TSG-WT-03 20MM 8mm 20-30MM 18g / m
I-TSG-WT-04 30MM 10mm 30-40MM 20g / m
I-TSG-WT-06 50MM 15mm 50-80MM 25g / m
TSG-WT-07 I-80MM 18mm I-80-100MM 30g / m
I-TSG-WT-09 I-150MM 22mm 150-200MM I-120g / m
TSG-WT-10 I-200MM 25mm 200-300MM 150g / m
TSG-WT-12 I-400MM 30mm 400-600MM 300g / m
Egqithileyo Isikrini sokubiya
Okulandelayo: Umthunzi welaphu